6 lakilen'ny fahombiazan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa amin'ny fampiasana media sosialy | Martech Zone
Nifampizara izahay antontan'isa momba ny fitomboan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny media sosialy, ary ity infografika ity dia mitaky kely kokoa, manome fanalahidy 6 miavaka hampidirin'ny orinasanao hiantohana ny fahombiazana. Ny serivisy ho an'ny mpanjifa Lousy dia mety handiso ny varotrao, noho izany ilaina ho an'ny mpivarotra ny manara-maso ny fihetseham-po sy ny fotoana hamaliana amin'ny alàlan'ny media sosialy.
Tao amin'ny fanadihadiana JD Power natao ho an'ny mpanjifa an-tserasera maherin'ny 23,000, 67% amin'ireo namaly no nitatitra fa nifandray tamina orinasa tamin'ny alàlan'ny media sosialy mba hanohanana. Na izany aza, tsy ampy ny fanatrehana amin'ny haino aman-jery sosialy fotsiny. Raha hampiasa azy io amin'ny fomba mahomby, ny orinasa dia tokony hitandrina amin'ny fomba fihainoany, ary ny tena zava-dehibe, ny fandraisan'izy ireo izany. Global Outsourcing
Ireto ny lakile 6, isaky ny sary Torohevitra ambony hampiasaina ny media sosialy amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa, avy amin'ny Global Outsourcing:
Safidio ny tsara indrindra Sehatra haino aman-jery sosialy izay mifanaraka amin'ny filanao ara-barotra - masoivoho izahay Agorapulse izay tena amporisihiko amin'ny fikambanana lehibe sy lehibe. Ny sehatra dia mampiseho ny fifandraisanao betsaka toy ny boaty fidirana, ahafahan'ny orinasa mamaly na manome solontena mamaly tsara ny olana.
Araho maso ireo resaka sosialy - Ireo mpanjifa sy ny vinavina dia hanonona anao amin'ny media sosialy nefa tsy hanisy marika anao na tsy miresaka aminao mivantana. Tena ilaina ny mampiasa sehatra ahafahanao manaitra rehefa voatonona ianao hitandrina mialoha ny olan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Ity dia endri-javatra lehibe iray hafa an'ny Agorapulse, fa momba izay ihany.
Ampiasao ny Feo havanana amin'ny feo tsy tapaka - Ny valinteny sassy dia tsy voadika amin'ny Internet foana, koa aza hadino ny mampifanaraka ny valinteninao amin'ny fangatahana nangatahina. Mila mikarakara ny ekipanao… ary toa sahala amin'ny fikarakaran'izy ireo… mba tsy hojerena na fanakianana fanampiny avy amin'ny tambajotra sosialy ataon'ilay olona ianao.
Tsarovy ny Ny atao sy ny tsy tokony hatao amin'ny haino aman-jery sosialy - aza atao ambanin-javatra, fafao na afeno ny hevitrao, miarova tena, miaraha amin'ny troll, na tototry ny fampahalalana be loatra ny mpanjifanao. Misaotra azy ireo tamin'ny fanolorany ny sain'ity olana ity ho anao, ekeo ny ahiahin'izy ireo, ary ialàna tsiny noho ilay olana. Ny tena zava-dehibe dia alao antoka fa afaka mahazo vahaolana izay mahafaly ny mpanjifa ianao.
Mampiasà a Knowledge Base - 91% amin'ireo mpanjifa an-tserasera no nilaza fa hampiasa loharanom-pahalalana onika raha misy izany ary ampifanarahana amin'ny filan'izy ireo. A Base Base dia afaka mampihena ny tapakilan'ny fanohanana, manome valiny haingana kokoa ary hahasambatra ny mpanjifa.
Fantaro hoe rahoviana ianao no handray olana amin'ny Internet - ny forum ho an'ny daholobe toy ny haino aman-jery sosialy dia mety tsy ny toerana mety indrindra ho an'ny mpanjifa tezitra sy olana sarotra. Tsy fahita matetika ny mangataka mpanjifa hanaraka anao, hifandray amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny hafatra mivantana, ary hamindra ny resaka an-tserasera amin'ny alàlan'ny telefaona na mivantana fa afaka manampy azy ireo amin'ny fomba mahomby kokoa ianao.
Tags: Serivisy ho an'ny mpanjifainfographic amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifafahombiazan'ny serivisy ho an'ny mpanjifaoutsourcing manerantanySary torohayhaino aman-jery sosialysary amin'ny haino aman-jery sosialy